Hypotonic အမျိုးအစားပေါ် VSD - အကြောင်းတရားများ, ရောဂါ, ကုသ။ အဆိုပါ IRR အန္တရာယ်ဖြစ်သနည်း
Hypotonic အမျိုးအစားပေါ် VSD - ကုသမှုလိုအပ်ပါသည်ကဖြစ်သင့်သည်ကိုမည်သို့ရသောအခါ?
hypotonic အမျိုးအစားပေါ် VSD - ကွဲပြားခြားနားသောကိုယ်တွင်းအင်္ဂါ၏လုပ်ငန်းဆောင်တာကိုထိန်းညှိပေးသောကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဦးနှောက်အာရုံကြောစနစ်၏အလုပ်လုပ်တဲ့ရောဂါ။ တိကျတဲ့အရိပ်လက္ခဏာအားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာထိုကဲ့သို့သောရောဂါဗေဒအခွအေနေသည်။ သူတို့ဟာ syndrome ရောဂါနှင့်သူ၏ကုသမှုကိုစတင်ပါရန်အချိန်အပေါ်ကိုသိရှိနိုင်ဖို့ကူညီပေးပါတယ်။
အလုပ်လုပ်တဲ့ပုံမမှန်အတော်ကြာမျိုးရှိပါတယ်။ သူတို့ကရောဂါလက္ခဏာတွေ၏ပေါ်ထွန်းခြင်း၏သဘောသဘာဝနှင့်ပြင်းထန်မှုအတွက်အလွန်ကွဲပြားခြားနားသောအားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာရှိပါသည်။ IRR အောက်ပါအမျိုးအစားများဖြစ်ပါသည်:
ဥပမာအားဖြင့်, dystonia hypotonic အမျိုးအစားသွေးဖိအားလျှော့ချလိုက်ပါ။ နှလုံးအမျိုးအစား functional ဖြစ်စေမမှန်များအတွက်နှလုံးသွေးကြောစနစ်နှောင့်အယှက်ဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်။ ဦးနှောက်မျိုးစိတ်ရောဂါ carotid သွေးလွှတ်ကြောတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ Pubertal option ကိုမကြာခဏကလေးဘဝနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်များတွင်ဖြစ်ပေါ်ပါသည်။
hypotonic အမျိုးအစားပေါ် VSD - အကြောင်းရင်းများ
ဒါဟာရောဂါဗေဒအခွအေနေငယ်ရွယ်စဉ်များတွင်ပိုမိုဘုံဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦးအထိုင်များတဲ့လူနေမှုပုံစံကိုဦးဆောင်သူကအများအားဖြင့်ဖြစ်ပေါ်နိုင်တစ်ဦးချင်းစီ။ IRR ဘို့အကြောင်းပြချက်ထိုကဲ့သို့ဖြစ်နိုင်သည်
မျိုးရိုးလိုက်ဓာတ်။ မိဘတစ်ဦးထိုကဲ့သို့သောအလုပ်လုပ်တဲ့ရောဂါခံစားနေရလျှင်ကလေးတစ်ဖြစ်လိမ့်မည်တဲ့စွန့်စားမှုတစ်ခုဖြစ်သည်လွန်းသောကြောင့်ရောဂါဖြစ်ပါတယ်။ မကြာခဏ hypotonic အမျိုးအစားပေါ် VSD သောအမျိုးသမီးလိုင်းမှတဆင့်ဖြစ်ပါသည်, မိခင်ကနေသမီးမှကူးစက်သည်။
စိတ်ထိခိုက်ဦးနှောက်ဒဏ်ရာရ။ ဆငျးရဲခွငျး CNS ဒဏ်ရာပြီးနောက်တောင်မှနှစ်ပေါင်းသရဲခြောက်သောမှပြန်လာလိမ့်မည်။
မကောင်းတဲ့အလေ့အကျင့်။ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းနှင့်အရက်သေစာအလွဲသုံးစားမှုအဆိုးအာရုံကြောနှင့်နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာစနစ်များကိုသာသက်ရောက်သည်။ အဆိပ်၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအောက်မှာသူတို့ရဲ့အလုပ်အတွက်ပျက်ကွက်။
ဟော်မုန်းမညီမမျှ။ အများစုကတော့, ဒီအချက်ကိုယ်ဝန်, အပျိုဖော်ဝင်ချိန်အတွင်းသို့မဟုတ်သွေးဆုံးနေစဉ်အတွင်းအရေးပါဖြစ်လာသည်။
Dystonia hypotonic အမျိုးအစား - အကျိုးဆက်များ
ပေမယ့်ဒီရောဂါဗေဒအခွအေနေဆိုးဝါးသည်မဟုတ်, ကကုသမှုလိုအပ်သည်။ ယူအချိန်မီအစီအမံမရှိပါကလေးနက်ကျန်းမာရေးပြဿနာများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကအန္တရာယ်ရှိတဲ့ IRR သည်အဘယ်အရာသည်:
phobias နှင့် neurotic ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး,
၏အသွင်အပြင် gastritis ။
hypotonic အမျိုးအစားပေါ် VSD ၏တိုးတက်မှုနှင့်အတူဤအမှု၌ပျေါပေါကျနိုငျသညျအဘယျသို့ပြဿနာများကြိုမြင်နိုင်ဖို့ခက်ခဲသည်။ တစ်ဦး functional ဖြစ်စေရောဂါဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်အဖြစ်အားလုံးတစ်ဦးချင်း, မည်သည့်ပုံစံများနှင့်အစီအစဉ်များရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး။ သူတို့အားသို့မဟုတ်အခြားအကျိုးဆက်များပေါ်ပေါက်လာသက်ရှိများ၏ဝိသေသလက္ခဏာများပေါ်မူတည်ပါသည်။ ရောဂါဗေဒ၏အချိန်မီ detection နဲ့စနစ်တကျရှေးခယျြသောကုထုံးဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုရှောင်ရှားရန်ကူညီပေးသည်။
hypotonic အမျိုးအစားပေါ် VSD - ရောဂါလက္ခဏာ
ပိုများသောဘုံ hypotonic အမျိုးအစားပေါ် VSD နှလုံးဆိုင်းဘုတ်များနေသောခေါင်းစဉ်:
နာကျင်မှု, လေထု၏မရှိခြင်းနှင့် "လည်ချောင်းထဲမှာစိမ်း" နေဖြင့်လိုက်ပါသွား;
သွေးဖိအားကို drop လုပ်တယ်။
အားနည်းခြင်း၏ချက်ချင်းခံစားမှု, syncope လိုက်. ,
အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်း dyspeptic မမှန်များထဲတွင်မကြာခဏသူတို့ကိုယ်သူတို့ကိုထင်ရှားစွာပြ:
ချိုးဖောက်မှု dacryo- နှင့် salivation;
VVD - Diagnosis
တိကျမှန်ကန်သောရောဂါဆရာဝန်တစ်ခုသာပဏာမစာမေးပွဲအပြီးနိုင်ပါတယ်။ သည်အခြားရောဂါဗေဒနှင့်အတူဤအလုပ်လုပ်တဲ့ရောဂါအလားတူရောဂါလက္ခဏာတွေ။ hypotonic အမျိုးအစားပေါ် VSD ထိုကဲ့သို့သောလေ့လာမှုများရှာဖွေရေးမှာကိုကူညီပါ:
hypotonic အမျိုးအစားပေါ် VSD - ကုသမှု
ဒီအလုပ်လုပ်တဲ့ပုံမမှန်နှငျ့ဆကျဆံတဲ့အခါမှာပြည့်စုံသောချဉ်းကပ်မှုလိုအပ်သည်။ သွေးကြော dystonia hypotonic ၏ကုသမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများကိုယူပြီးမှကန့်သတ်သည်မဟုတ်။ အဆိုပါအကူအညီလာနှင့်အခြားထိန်းသိမ်းရေးနိုင်သည် "။ မူးယစ်ဆေးဝါးများ" physiotherapy, chiropractic နှင့်လူကြိုက်များ ထို့အပြင်ကြောင့်အစားအသောက်များတွင်နှင့်လူနေမှုပုံစံစတဲ့ထိန်းညှိဖို့အရေးကြီးပါတယ်။
hypotonic အမျိုးအစား VSD ကုသမှု - ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများ
သငျသညျ samovrachevaniem မပွုနိုငျသညျ! အာရုံကြောနှင့်နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာစနစ်များအပေါ်တစ်ဦးသိသာအကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်အတူမူးယစ်ဆေးဝါးထိန်းအကွပ်မဲ့အုပ်ချုပ်မှုလေးနက်အကျိုးဆက်များကိုနှိုးဆော်ခြင်းနိုင်ပါတယ်။ အားလုံးချိန်းအဖြေရှာတဲ့စာမေးပွဲ၏ရလဒ်ပေါ်တွင်အခြေခံဆရာဝန်လုပ်ပေးသင့်ပါတယ်။ အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်း hypotonic အမျိုးအစားပေါ် VSD မှာကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတာဝန်ပေးအပ်ထားပါသည်:
nootropic အေးဂျင့်များ (piracetam, nootropics, Fezam);
စိတ်မကျဆေး Antidepressants (Tsipraleks, amitriptyline );
ပဿဒ္ဓိ (Relium, Fenazepam, diazepam);
venotonics (Aescusan, Detraleks);
ဦးခေါင်း (Betaserk) အတွက်ဆူညံသံနှင့်အတူ;
ဖိအား (Ginkofar, Memoplant) ပုံမှန်ဖြစ်သည်။
hypotonic အမျိုးအစားပေါ် VSD မှာဗီတာမင်
အလုပ်လုပ်တဲ့ရောဂါနှင့်အတူဇီဝတက်ကြွစွာအေးဂျင့်များ၏ဧည့်ခံဆေးဘက်ဆိုင်ရာကြီးကြပ်မှုအောက်မှာထွက်သယ်ဆောင်သင့်ပါတယ်။ hypotonic အမျိုးအစားပေါ် syndrome ရောဂါ VSD ရောဂါမှန်လျှင်, ဤဗီတာမင်သတ်မှတ်ထားသောစေခြင်းငှါ:
Thiamine - ထို hematopoietic နှင့်နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာစနစ်များကိုထိန်းညှိ;
Retinol - ရူပါရုံကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်ခြင်းနှင့်ကင်းလွတ်၏သငျ့လျြောသောစစ်ဆင်ရေးကိုအားပေးအားမြှောက်;
riboflavin - အာရုံကြောစနစ်၏သင့်လျော်သောလုပ်ငန်းဆောင်တာများအတွက်အရေးကြီးပါသည်ကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်ကခိုင်မာစေ;
Pantothenic အက်ဆစ် - အာရုံကြောလှုပ်ရှားမှုနဲ့ဆက်စပ်လုပ်ငန်းစဉ်များကိုထိန်းချုပ်;
pyridoxine - စိတ်ဖိစီးမှုအခြေအနေများဖို့သက်ရှိများ၏လွယ်ကူစွာထိခိုက်လျော့နည်းစေသည်;
Cyanocobalamin - ကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်ကတာဝန်ယူဆောင်ရွက်သည်နှင့် neurodegenerative ရောဂါတားဆီး;
အက်စ်ကောဘစ်အက်ဆစ် - ထိုသွေးကြောမျှင်ကလေးများ၏၏ bandwidth ကိုထိန်းချုပ်ထားခြင်းနှင့်ဟော်မုန်းများ၏ပေါင်းစပ်ပါဝင်ပတ်သက်သည်,
ဗီတာမင် D ကို - နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါဗေဒဆန့်ကျင်ကာကွယ်ပေးသည်;
Tocopherol - နှလုံးတိုက်ခိုက်မှုနဲ့လေဖြတ်မှုအန္တရာယ်ကိုလျော့ကျစေပါတယ်;
Niacin - ထိုနှလုံးသွေးကြောစနစ်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်သည်။
hypotonic အမျိုးအစားပေါ် VSD - ရိုးရာကုစား၏ကုသမှု
Desire မူးယစ်ကုထုံးတွေနဲ့ပေါင်းစပ်များတွင်အသုံးပြုအခြားရွေးချယ်စရာနည်းလမ်းများ။ သူတို့ကသာဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်ပြီးနောက်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ရိုးရာကုစားသဘာဝအစိတျအပိုငျး (ဒါကြောင့်အပေါ်ဆေးဝါးကုသမှု inflorescences, အမြစ်များ, အသီးအပွနှင့်) ၏လုပ်ပေမယ့် "မူးယစ်ဆေး" ၏အစိတ်အပိုင်းများကိုမတည့်ဘူးဆိုတာသေချာအောင်မှသူတို့ကိုမလျှောက်ထားမီနေကြသည်။
ပျားရည်နှင့်ဆေးဖက်ဝင်အပင်များမူးယစ်ဆေးဝါး၏ hypotonic အမျိုးအစားပေါ် VSD ဆက်ဆံဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
chamomile ပန်းပွင့် - 100 ဂရမ်;
ဘုစပတ်သစ်သားဘူးသီး -100 ဂရမ်;
Hypericum - 100 ဂရမ်;
rosehip - 100 ဂရမ်;
ကျဉ်းမြောင်းသွယ်လျ elecampane - 100 ဂရမ်;
ရေ - 500 ml ကို;
အလင်းပျားရည် - 1 tbsp ။ ဇွန်း။
ပျားရည်ရဲ့ဖွဲ့စည်းမှုကြွယ်ဝစေ။ အဆင်သင့် "မူးယစ်ဆေး" ဟုအဆိုပါရေခဲသေတ္တာထဲမှာတင်းကျပ်စွာလုံပိတ်ဖန်ကွန်တိန်နာထဲမှာသိမ်းထားတဲ့ရပါမည်။
ဟင်းရည် Accept နံနက်စာမီနှင့်ညစာပြီးနောက်2နာရီအကြာတွင် 100ml လိုအပ်ပါတယ်။
hypotonic အမျိုးအစားပေါ် VSD - လက်စွဲစာအုပ်ကုထုံး
ကိုယ်ခန္ဓာကိုတခုတခုအပေါ်မှာအံ့သြဖွယ်အကျိုးသက်ရောက်မှုဟာအနှိပ်ရှိပါတယ်။ ဒါဟာ hypotonic အမျိုးအစား VSD ကိုယ်ဝန်စဉ်အတွင်းရောဂါသည်အဘယ်မှာရှိကိစ္စများတွင်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။ အနှိပ်နှင့်၎င်း၏ကြာချိန်ကရွေးခြယ်ဆရာဝန်အမျိုးအစား။ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအပြည့်အဝခုနှစ်ထွက်သယ်ဆောင်ပြုလုပ်လျှင်အကျိုးသက်ရောက် A မြင့်ဆုံးလိမ့်မည်။ VSD hypotonic အမျိုးအစားမှာအနှိပ်ခံတစ်ဦးဂန္သို့မဟုတ်တစ်အချက်နိုင်ပါတယ်။
ဒါဟာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအောက်ပါကိစ္စများတွင် contraindicated ဖြစ်ပါတယ်:
အဆိုပါဖျော်ဖြေဘယ်မှာအသားအရေ၏ပျက်စီးသွားသောဧရိယာ massage သင့်ပါတယ်လျှင်,
အဆိုပါ lymph node များအတွက်,
အရေပြား purulent ကိုတွေ့ရှိရပါသည်ရှိပါတယ်လျှင်။
hypotonic အမျိုးအစားပေါ် VSD အတွက်ကုထုံးလေ့ကျင့်ခန်း
အရှင်လေ့ကျင့်ခန်း functional ဖြစ်စေမမှန်များ၏ရှုပ်ထွေးကုထုံးအတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍရှိသည်။ လေ့ကျင့်ခန်း 2-3 ကြိမ်တစ်နေ့လျှင်ဖျော်ဖြေရပါမည်။ အဆိုပါဝန်အလယ်အလတ်ဖြစ်သင့်သည်။ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်လက်မခံနိုင်။ hypotonic အမျိုးအစားပေါ် VSD မှာလေ့ကျင့်ခန်းပါဝင်နိုင်ပါသည်:
hypotonic အမျိုးအစားပေါ်တစ်ဦး VSD မှာစားရန်ဘယ်လိုနေသလဲ?
စနစ်တကျရှေးခယျြသောအစားအသောက်များတွင်ဤရောဂါခံစားနေရပြီး, လူ့အခွအေနေသက်သာစေနိုင်ကြောင်းဖို့ကူညီပေးသည်။ VSD မှာအစားအစာ, ရောဂါ hypotonic အမျိုးအစားဆိုပါကအောက်ပါအခြေခံမူတွေ့ဆုံရန်ရမယ်:
(အဘယ်သူမျှမ contraindications ရှိပါတယ်လျှင်, ရေ2လီတာတစျနေ့) စစ်အစိုးရသောက်သုံး။
hypotonic အမျိုးအစားပေါ် VSD များအတွက်အစားအသောက်အစားအစာများကိုကြော်ဖက်တီး၏ကန့်သတ်များအတွက်ပေးပါသည်။ အစားအသောက်များတွင်မျှမျှတတဖြစ်သင့်တယ်။ မကြာခဏရှိပါတယ်အသေးစားဝေမျှအတွက်လိုအပ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်။ လက်မခံနိုင် Overeating ။ လူနာခန္ဓာကိုယ်ကပေးတဲ့အချက်ပြခြင်းဖြင့်ပဲ့ထိန်းထားရမည်ဆေးပညာအစားအသောက်များတွင်ဘာသာရပ်။ အခြေအနေကိုပိုဆိုးလာရင်ဆိုပါကဆရာဝန်မှချက်ချင်းသတင်းပို့ရပါမည်။
Duodeno-အစာအိမ် reflux - ငါတို့သည်အကြောင်းရင်းရှာနေနှင့်ကုသမှုကိုရွေးချယ်ထားပါသည်
Rinofluimutsil - Analogues
ပိတ်ဆို့ခြင်းချောင်းဆိုးရင်ကျပ် - အကြောင်းတရားများ, ကုသမှု, နှင့်ရောဂါအရေးကြီးသောအင်္ဂါရပ်များ
Gilbert ရဲ့ syndrome ရောဂါ - ကုသမှု
Detraleks - အသုံးပြုမှုအတွက်လက္ခဏာများ
ပူးတွဲဒူး၏ meniscus မှပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု - ရောဂါလက္ခဏာများနှင့်ကုသရေး
သွေးထဲတွင်စုစုပေါင်းပရိုတိန်း - စနစ်တစ်ခု
တင်ပါးဆုံရိုးကျိုး - ခွဲစိတ်ပြီးနောက်ပြန်လည်ထူထောင်ရေး
ကိတ် Hudson သစ်ကိုရည်းစားနှင့်အတူထွက်လာသ
Underarm lymph node များ
Transverse ကြိုး - ဘယ်လောက်နဲ့ဘယ်လိုအစာရှောင်ခြင်းသင်တစ်ဦး Cross-ကြိုးသွားနိုင်သလဲ
အဆိုပါ urethra အတွက် Itching
ဂျပန်တွင် Melania Trump: လက်ဝတ်ရတနာ Boutique သွားရောက်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ကျောင်းတွင်ရာတွင်ခန်းဂျီးရေးသားခြင်း